Ihe site Lyndon Reys	 6 Comments
Gịnị bụ iwu ọnọdụ nke Kratom na Arizona State dị ka nke 2014? Kratom eji na Arizona n'ike n'ike na-amụba, na a ọtụtụ ndị nwere ajụjụ banyere otú dị mma, iwu, ma dị irè ogwu bụ. Ihe na-esonụ ọmụma ga-wụsịrị ụfọdụ ìhè na Kratom na-eji na Arizona.
Arizona ji ọtụtụ ojiji nke herbal ịgba akwụkwọ na-eduga ná a ezi mmasị kratom. Nnukwu mma nke a ogwu bụ otú ọ na-emepụta: site ọrụ ugbo n'ógbè raara onwe ha nye na-amị kasị mma osisi na ọ bụghị site na-abụghị onye na-ekesa emmepe.
Ya mere, ebe ke Kratom na-abịa site? Kratom abịa site Mitragyna Speciosa osisi nke Southeast Asia. The ogwu na-amụba na-enweghị ga-emezu, na epupụta n'aka ndị tozuru okè osisi na-họọrọ na graded dabere na ha àgwà iji hụ na nke kacha mma ndị iru-azụ na Arizona. The unrefined epupụta na-Fikiere ma pounded n'ime a ntụ ntụ ma ọ bụ ka ọ ghọọ a tii. The owuwe ihe ubi nke a ogwu a na-aga ruo ọtụtụ narị afọ na ogologo akụkọ ihe mere eme nke dị mma eji na mba nke Thailand.
Ọ Kratom iwu na Arizona?
Kratom bụ iwu na akụkụ nile nke Arizona, nke pụtara na e nwere enweghị ókè na ole ị pụrụ iri na ole ha nwere ike ịzụta. Ọ bụ ezie na Kratom na-ele anya dị ka ezigbo herbal na nkà mmụta ọgwụ na ọtụtụ akụkụ nke ụwa, e nwere ndị ka mba ụfọdụ na iwu megide ya kpam kpam maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị burukwa. Na February 2014, enwere a votu na Arizona ala ome iwu nke gaara mere Kratom illegal iji na steeti. Otú ọ dị, ikpeazụ nkeji, Mitragyna Speciosa na alkaloids e wepụrụ ụgwọ nke na-egosi na ala na-agba mbọ na-edebe ya iwu dịkarịa ala n'ọdịnihu dị nso.
Eduzi ka Ịzụ Kratom
Ebe a na-a aro ole na ole maka ọhụrụ ọrụ ndị nwere ike-bụkwanụ site dịgasị iche iche nke kratom ngwaahịa si n'ebe. N'ihi na EBIDO, mara na Kratom a mata ya akwukwo agba na mpaghara ya sitere. Onye ọ bụla mpaghara nwere a osisi na ya pụrụ iche mix nke Njirimara, ma na agba nke epupụta na-emekarị na-enye ezigbo ihe gosiri na otú ogwu ga predominantly na-arụ ọrụ. Red epupụta dị ukwuu n'ihi na nke na-amị ntụrụndụ. White epupụta dị mma maka ume boosts na-akpali akpali nke àgwà, na green epupụta nēche ikpokọta àgwà nile nke na-acha ọcha na-acha uhie uhie epupụta.
Nkwanye: New ọrụ na Arizona na-amalitekarị na Red Bali nje, nke na-enye onye ọrụ niile uru nke Kratom. Ha na-enweta anuri, tress enyemaka, ọzọ ume, mgbu na ahụ erughị ala enyemaka, na ọ dịghị nchegbu. Ọ bụ ezi echiche ịzụta a mgbe nile ike ntụ ntụ na mbụ ma zere extracts nke kwesịrị na-debeere ahụmahụ ọrụ.
A otutu ọhụrụ ọrụ agbasaghị chọrọ nje na ike mmetụta. Iji chọpụta na, i kwesịrị ime a dịgasị iche iche ngagharị nje dị site online kratom obodo. Dị ka e kwuru na mbụ, onye ọ bụla na osisi nwere ya pụrụ iche mix nke mmetụta, si Malaysian ka Sumatran Kratom. Nanị ụzọ chọpụta nke nje bụ ihe ziri ezi n'ihi na ị bụ ịgbalị ha na nnyocha tupu ahịa echiche na nje.
Ebee iji nweta ya N'ihi Sale
N'ihi pụrụ ịdabere na American online Kratom mgbere, Arizona bi pụrụ ịnụ ụtọ mfe nnweta ogwu. Otu ọwọrọiso ere, Arena Ethnobotanicals nile Asia bupu oru stof n'ihi na ị mere, ị na-adịghị echegbu onwe banyere na. Ha nwekwara otu ụbọchị mbupu, nke pụtara na ị nwere ike gị Kratom n'ime ụbọchị ole na ole mgbe ịtụkwasị gị iji (karịsịa ebe ị na-adịghị echegbu onwe banyere bupu mbipụta).
Ị nwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na mgbe ọ na-abịa Kratom: powders, nwere ike tinctures, na mmiri mmiri extracts. A ọkà herbal Shopper ga kasị amasị agbalị a dịgasị iche iche nke ụdị ịchọta onye nke suut ya ma ọ bụ ya kacha mma. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ ma ọ bụ vetiran ọrụ n'ihi nke a otu ihe: Kratom ga-aghọ a ụwa ma ama ogwu ekele ya ekwe ike uru.